Baphoxekile kumiswaucwaningo obeluhlola ngegciwane lengculazi
Ucwaningo, obelwenziwa kubantu baseNingizimu Afrika abangaphezu kuka-5 000 abangenalo igciwane lengculazi, iHVTN 702, ebuye yaziwe ngokuthi uhambo, lumisiwe emuva kokuthi imiphumela yalo yakamuva iveze ukuthi umgomo awulivikeli igciwane lengculazi. Isithombe: Edward Echwalu Reuters File
BAPHOXEKILE ososayensi ngokumiswa kwemiphumela yocwaningo obeluhlola ngomgomo wokuvikela igciwane lengculazi.
Ucwaningo, obelwenziwa kubantu baseNingizimu Afrika abangaphezu kuka-5 000 abangenalo igciwane lengculazi, iHVTN 702, ebuye yaziwe ngokuthi uhambo, lumisiwe emuva kokuthi imiphumela yalo yakamuva iveze ukuthi umgomo awulivikeli igciwane lengculazi.
Ucwaningo belwenziwa kubantu abaneminyaka ephakathi kuka18-35, ezikhungweni eziwu-14. Lwenziwa emuva kokuthi kube nocwaningo olwenziwa e-laboratory olwakhipha imiphumela ethembisayo eThailand ngo-2009.
Ucwaningo lwaseThailand lwakhombisa ukuthi kukhona ukuvikeleka okwenziwa wumgomo. Emuva kwawo kwabe sekwenziwa ucwaningo obese lwenziwa kubantu.
Luqale ngo-2016 ucwaningo lumiswe ngemuva kokuthi seluqhubeke izinyanga eziwu-18 .
USolwazi uGlenda Gray, umengameli nesikhulu esiphezulu kwiSouth African Medical Research Council, obehola ucwaningo, uthe baphoxekile ngemiphumela kodwa ososayensi ngeke baze baphumule bengakalitholi ikhambi elizovikela ukuthi abantu bangangenwa yigciwane ngokuphelele.
“Akuyona imiphumela ebesiyifisa kodwa siwukhombisile umhlaba ukuthi umgomo ngeke uvikele abantu egciwaneni lengculazi,” kusho yena.
UDkt Sizulu Moyo, weHuman Science Research Council (HSRC), uthe udumele ngemiphumela yocwaningo kodwa uyaziqhenya ngokuthi abacwaningi ebebelwenza bakhiphe imiphumela nakuba kungeyona imiphumela ebebefisa ukuthi kube yiyo.
“Isayensi isebenza kanjalo. Uma ungakalwenzi ucwaningo ngabantu ngeke ube nesiqiniseko. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa, ososayensi basazoqhubeka becwaninga kuze kube liyanqotshwa igciwane. Abantu abebebambe iqhaza ocwaningweni bangadikibali.”
UDkt Yogan Pillay, umqondisi jikelele woMnyango weMpilo, uthe igciwane lengculazi liphazamisa imizamo yomnyango yokwelapha izifo ngakho beseka noma yimiphi imizayo eyenziwa emhlabeni yokuqhamuka nomgomo.
Isikhulu somkhandlu wengculazi, iSouth African National Aids Council, uDkt Sandile Buthelezi, uthe imiphumela iphoxile kodwa iNingizimu Afrika iyaqhubeka nezinhlelo zayo zokubhekana negciwane ezifana nokukhishwa kwephilisi elisha elithithibalisa igciwane egazini elingagulisi kakhulu kanye nokuthuthukiswa kwendlela yokukhishwa kwephilisi elisetshenziswa ngabangenalo igciwane ukubavikela Pre and post exposure prophylaxis (PrEP).